Ka taxaddarida Kovid-19 ee lagu qaadayo Gaadiidka Rakaabka tareenka! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKa taxaddarida Kovid-19 ee lagu qaadayo Gaadiidka Rakaabka tareenka!
18 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Ka-hortagga coronavirus ee tareenka lagu qaado
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu ayaa warbixin ka siiyay warbaahinta magaalada Lapseki, halkaas oo uu ugu tegey xafladda lagu dhagax dhigayay dhismayaashii ugu dambeeyay biraha biriijyada biriijka Çanakkale.
Isaga oo sharaxaya mashaariicda wasaaradiisa mudada cusub, Karaismailoğlu wuxuu yiri: “Waxaan dhameystirnay kaabayaasha wadooyinka ee dalka. Kaabayaasha diyaaradaha ayaa sidoo kale la dhameystiray. Waxaan sidoo kale haysannaa yaraanta tareenka. Waxaan diirada saari doonaa jidadka tareenka muddada soo socota. Waxaan leenahay shabakad 12 kun oo kiiloomitir ah hadda. Markaan sare u qaadno kumbuyuutarka tareenka xawaaraha sare ku socda ee 200 5 km gaaraya illaa 500km, waxaa la sameyn doonaa lafaha leh 17 kun oo kilomitir oo iskuxiran. Markaa, waxaan si gaar ah u dhigi doonnaa xargaha laf-dhabarta meelaha warshadaha waxaanan isku geyneynaa awood dhaqaale iyo gaadiid xamuul. ”
“Guul qaran ka gaadhista Saxeexida Xawaaraha Xawaaraha Sare iyo Khadadka Magaalada Inner”
Karaismailoğlu wuxuu tilmaamay inay jirto ku soo bixid qaran ahaaneed labadaba tareenka xawaaraha sare iyo jidadka magaalada ee saxiixa, wuxuuna cadeeyay in nolosha umadda ay isbadali doonto ka dib faafitaanka cudurka coronavirus, iyo inay diyaar u yihiin wasaarad ahaan, wuxuuna cadeeyay taxadarka laga qaado tareenka:
"Waxaa jiri doona kuraas faaruq ah caafimaadka ka danbeeya maraakiibta saaran tareenka"
Tareenada ayaa sidoo kale ka shaqeyn doona 50 boqolkiiba awooda. Dhab ahaan waxaa jiri doona kuraas faaruq ah caafimaadka. Taageero maaliyadeed iyo mid maskaxeed ayaa loogu baahan yahay muwaadinku si uu ula qabsado muddada cusub. Waa lagama maarmaan in la bixiyo allabaryo si dib loogu helo. Marka loo eego cilmi-baarista, kama qaban karno tirooyinka Jannaayo ee diyaaradda xitaa xilligan sannadka soo socda. Waxaa jira tirooyin la mid ah tareenka. Nolosha ummadu hadda way is beddeli doontaa. Waxaan rajeynayaa inuu sida ugu dhakhsaha badan ugaga gudbi doono. ”
Markii la bixinayay macluumaadka ah in goobaha dhismayaasha dib loo habeeyay intii uu socday cudurka faafa, Karaismailoğlu wuxuu yidhi, “Deegaano aad u caafimaad badan oo go'doon ayaa la sameeyay. Maalgelinta kaabayaasha aasaasiga ah iyo maalgashiga istiraatiijiyadeed ayaa sii socota. Waxay kaloo keenaysaa lacag dheeri ah dhaqaalaha. Markii aan bixinay lacagta, waxay ku dhacdaa dukaanka raashinka ee gobolka halkaas laga shaqeeyo. ”
Gaadiidka Gaadiidka ee BTK Line Railway
Kordhinta Mas'uuliyadda Adeegga Dadweynaha ee Gaadiidka Gaadiidka Waddooyinka
Dhameystiridda Qiimaha lagu Adeegsaday Gaadiidka Rakaabka ee Wadada